Taliye Sare oo ka tirsan Xuutiyiinta oo lagu diley Galbeedka Yemen – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Taliye Sare oo ka tirsan Xuutiyiinta oo lagu diley Galbeedka Yemen
Telefishinka Alarabiya ee Sacuudiga waxa uu baahiyey inay Ciiddamadda Isbahaysiga ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ay maanta dagaal ku dileen Taliye iyo Maleeshiyo la socotay.
Sarkaalka la dilay ayaa lagu sheegay magaciisa Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Al-mutawakal, kaasi oo la sheegay in lagu dilay duleedka magaalladda Xudeydah ee Galbeedka dalkaasi.
Isbahaysiga Sacuudiga iyo Ciiddanadda Dowladda Dibadb-jooga ee dalka Yemen waxay shalay bilaabeen Guluf-colaadeed si ay Maleeshiyadda Xuutiyiinta uga saaraan magaalladda Istaraatijiyadda leh ee Xudeydah oo kaabiga ku haya Gacan-biyoodka Baab Al-mandab ee Badda Cas.
Ilo ku dhow Xuutiyiinta ayaa sheegay in Sarkaalka la dilay uu Taliye ka ahaa Guuto lagu magacaabo Al-xuseyniyah oo loogu talagalay inay difaacaan Xudeydah.
Sarkaalka la dilay waxaa la sheegay inuu dalka Iiraan ku soo qaatay Tababar socday muddo 10-sanno ah
Wararkii ugu dambeeyay xiisada Ukraine iyo Ruushka oo Cirka isku sii shareertay
Dhinaca kale, Telefishinka Alarabiya ee Xaruntiisa Dhexe ku taallo magaalladda Dubai waxaa laga baahiyey in Taliyihii Xuutiyiinta ee Aagga Almanzar ee Koonfurta Garoonka Diyaaradaha Xudeydah, G/sare Xuseen Al-marani oo loo yaqaanay Abu Munathar maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay duleedka Garoonka Xudeydah.
Waxaa kale o ola sheegay in 13 Maleeshiyo la socotay lala dilay Sarkaalkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, Warbaahinta Sacuudiga iyo Imaaraadka kama hadlin weerarkii ay Xuutiyiinta la beegsadeen Markab Dagaal oo ay Milliteriga Imaaraadka lahaayeen oo ku sugnaa meel ka baxsan Xeebta magaalladda Xudeydah.
Markabkaasi ayaa la sheegay in burbur weyn loo geystay, isla markaana uu dab xooggan ka kacay, sida ay baahiyeen qaar ka mid ah Warbaahinadad Caalamka.
Duqa Muqdisho oo amray in la banneeyo Garoonkii Jeenyo iyo Goobo kale
Waqti dheeraad ah oo lagu kordhiyey Xaaladda Deg-dega ah ee saaraan Tuniisiya